Mwanasikana wehusiku, inonakidza novel naLaura Gallego | Zvazvino Zvinyorwa
John Ortiz | | Fantasy, Vechidiki Mabhuku, Novela
Mwanasikana wehusiku inoverengeka nemunyori wechiSpanish nyanzvi mumabhuku ekufungidzira, Laura Gallego. Iri bhuku rinoratidzira kuratidzwa kwerudo sesimba rinokurudzira rechikamu chisingaenzanisike (kune zvese zvakanaka nezvakaipa). Saizvozvowo, zita racho rinoganhura miganho ye "hunhu hunogamuchirwa" maitiro munharaunda yekumaruwa.
Sezvo mune mazhinji emabasa emunyori weValencian, Mwanasikana wehusiku ane mukadzi wechikadzi se protagonist. Izvo, inochengetedza dingindira remadhayi ekutsiva rinoreva basa revakadzi munharaunda, kukosha kwekusimudzira hunhu panguva yekukura kwemunhu uye kuremekedza nharaunda.
1.1 Anofarira mudiwa
2 Laura Gallego uye zvinyorwa zvinonakidza nhasi
2.1 Kutengesa vs Hunhu: gakava risingaperi
2.2 Mwanasikana wehusiku, wechidiki kuita paranormal kudanana?
3 Kuongorora kwemwanasikana wehusiku
3.1.2 Max mupurisa
3.3 Bhuku rekutanga uye rinotarisirwa panguva imwe chete, zvinoita here?
3.4 Kunakidza uye hapana chimwezve
3.5 Bhuku revhiki
Laura Gallego ndomumwe wevanyori vane mukurumbira vanotaura chiSpanish mune yekufungidzira mabhuku subgenre mukati memakumi maviri emakore apfuura. Kukwanisa kwake kujekesa masuniti akatorwa kubva mukufungidzira kwakaita mupiro wakakosha kune tsamba dzeSpanish.. Uye zvakare, ane chimiro chinomutendera kuti agadzirise chero musoro wenyaya, kunyangwe hazvo aine gakava.
Gallego akaberekerwa muCuart de Poblet, mataundi mukati meValencian Community, mu1977. Iye ane degree muSpanish Philology, basa raakadzidza aine chinangwa chekuzvipira iye kudzidzisa mabhuku. Kunyangwe nekutenda kune rake rakawandisa uye pamusoro pebasa rese rakabudirira, kusvikira zvino haasati azvitsaurira kune rimwe basa kunze kwekunyora.
Gallego anozvitsanangura semunhu anoda zvekufungidzira. Ndiyo mhando inonyanya kufarira kunyora nekuverenga. Ndosaka bhuku raanofarira riri Nyaya isingaperi rakanyorwa naMichael Ende. Iye anozvizivisawo iye anofarira Tolkien, George RR Martin naPaulo Coelho. Unhu hwake hwaanofarira ndiSherlock Holmes.
Kunyangwe akazvarwa makore mashoma apfuura, iye "anowanzoita Mireniyumu". Vhidhiyo mutambo wemudiwa (Final Fantasy y Warcraft pamusoro pechinzvimbo). Iye anonzi zvakare akapindwa muropa kwazvo ne cinema, (Mulan y Vapambi vecaribbean kutanga kuraira). Saizvozvowo, Gallego anonongedza pakati peaanofarira maekisiki (manga) Ranma ½, Ziviso yerufu y Alita, ngirozi yekurwa.
Laura Gallego uye zvinyorwa zvinonakidza nhasi
Makumi matatu ekupedzisira akaona kukwira kukuru mumabhuku evechidiki. Sezvo JK Rowling akatyora zviyero zvekutengesa uye zvinyorwa nezvose zvakasikwa zve Harry Potter, mashiripiti anonyanya kufarirwa (nyowani) mashura, vechidiki nevakuru vechidiki vave vaverengi vanofarira.
Kana munyori weBritish uyu nevamwe vakaita saStephanie Mayer, Suzanne Collins kana John Green vane chero hunhu, zvinofanirwa kunge zvakaunza mabhuku padyo nevanhu vazhinji vezera rechikoro nemayunivhesiti. Mapoka akamira kuverenga achingo sungirwa. Panguva imwe, avo vakanga vatove vakajaira kutakura bhuku pasi pemaoko avo vakanga vasisaonekwe sezviitiko zvisina kujairika kana kugona nerds.
Kutengesa vs Hunhu: gakava risingaperi
Ehezve, nhaurirano ikozvino inotenderera pahunhu hweiyi "zvinyorwa." Hakusi kuwedzeredza kusimbisa kuti mazhinji eaya magwaro ane hunhu "hunopokana" hwenhoroondo., kutaura zvishoma. Kune mamwe makesi uko kuchinjika kwemafirimu kwaive nani -Saga Twilight, semuenzaniso- izvo, zviri kutaura zvakakwana.
Mwanasikana wehusiku, Wechidiki ari paranormal kudanana?
Unogona kutenga bhuku pano: Mwanasikana wehusiku
Nechirevo chakatsanangurwa mundima dzapfuura, mazhinji e Vaverengi vane zvavanofarira zvekunyora zvisiri pachena kune zvekufungidzira kana "zvevechidiki" nyaya vanonzwa kusavimba. Uyu mubvunzo wepanyama, nekuti Laura Gallego ane hunyanzvi mu anonakidza mabhuku evana nevechidiki.
Saka kana vampire ikapinda murangano, inogona kuwira muchikamu che "kuyaruka paranormal kudanana." Nyeredzi ne porcelain bloodsuckers akafanana neaya akagadzirwa naMayer. Kana chimwe chinhu chisingatendeseke, kunge saga isingaperi yaCassandra Clare, Vanogadzira. Sezvineiwo Mwanasikana wehusiku hachisi chinhu kana chimwe.
Kuongorora kwemwanasikana wehusiku
Ndiye mutambi mukuru, Iye musikana akanaka kwazvo ane rudo rwepamoyo rwakashandura hupenyu hwake zvachose. Anotaridza kushinga uye kusagadzikana mukufunga kwake, kunyanya izvo zvine chekuita nerudo rwake uye kuvimbika kune anorwara uye asingabatsiri murume.
Mushandi wehurumende weko akadzikama. Anonyanya kukwezva kuna Isabelle asi anofarira kuvanza manzwiro ake echokwadi. Munguva yezviitiko, anoita kunge murume ari kushomeka mukutanga, asi mune mhedzisiro anoratidza kukosha kwake uye, pamusoro pezvose, pfungwa zhinji.
Iye murume wechidiki anonetsekana zvikuru nezve izvo shamwari dzake dzinofunga nezvake.Ndokusaka achiita zvese musimba rake kuratidza hushingi uye kushaya hanya. Ehezve, pasi pasi anotyiswa nezvakavanzika zvakavanzwa mumba inotyiwa kwazvo muguta.
Ndiye Isabelle matsi-mbeveve "squire." Kubudikidza nechimiro chake, munyori anotamba zvishoma nezvisingaite zvevaverengi nekuti inozvipa icho chakaipa pakutanga. Asi pasi pasi, iye akatendeka zvakanyanya, ane moyo wakanaka uye asingazviriritire.
Bhuku rekutanga uye rinotarisirwa panguva imwe chete, zvinoita here?
Mutsara naLaura Gallego.
Gallego ane mukana wekutiza kubva kune chaiwo maficha erudzi urwu rwerondedzero. Iyo inofamba ichibva pane yakajairwa ngano yemusikana asingabatsiri akabatwa nekunzwa kwekukwezva kwakarambidzwa kune munhu uyo, kunyange asiri muipi, asiri "chingwa chamwari" futi. Zvisinei, zvimwe zvinhu hazvishanduki, sezvo rangano richifamba nekuda kwezvido zvemusikana anonyangadza asina kunyanya kujeka.
Chikamu chekutanga kwe Mwanasikana wehusiku iri panguva yakasarudzwa nemunyori kutanga kurondedzera zviitiko. Kana protagonist (mudiki kwazvo) achiita zvaasingafanire uye nekudaro anofanira kutakura mhedzisiro. Ehe, zvaigona sei kuve neimwe nzira: zvese zvaive zverudo. Kunyangwe - zvakakodzera kujekeswa - paakadanana, "hafu yake iri nani" yakanga isina mazino.
Kunakidza uye hapana chimwezve
Asi kutanga kubva kunzvimbo dzakajairika kwanga kusingakwani kuti nyaya itize isina kukuvara kubva kune nyika inozivikanwa kune veruzhinji. Saizvozvo, muverengi asina hanya anokwanisa kufungidzira kunetsana kuri pakati nepakati pebhuku. Kunyangwe isiri "rudo rwevechidiki", pane nyaya yerudo yakakwenenzverwa zvisingaite.
Chero zvazvingaitika, izvi hazvisi chipingaidzo chekuchengetedza kufarira kuverenga kusvika kumagumo. Nekuti Zvinogona kunge zvichitarisirwa, asi frenetic kumhanya kwakagadzirwa nemunyori hakusiye yakawanda nzvimbo yekufunga. Uye kupfuura kumwe kumanikidzwa kwakamonyoroka zano, kuvimbika kwenyaya kunoramba kuri kwakasimba.
Mwanasikana wehusiku Iyo inyore chaizvo yakanyorwa inoverengeka, ine yakachena uye inoyerera maitiro. Pamwe pamwe nenyaya ine simba uye isina kuomarara yemutauro, inoburitsa manzwiro muhuwandu. Kutenda kune zano rakagadzirwa mumapeji anodarika zana nemakumi mashanu, rakashongedzwa nemimwe mifananidzo. Pamwe chete, izvi hunhu zvinoita kuti ive chinyorwa chakanakirwa kunakirwa nekupfuura.
Naizvozvo, kuverenga kwayo kwakakwana kutiza maitiro uye kukurudzira fungidziro. Kumwe kutarisa kune zvakasikwa zvemadhimoni anonwa ropa; zvisikwa izvo kubvira Bram Stoker's Dracula vasina kukwanisa kupedza zvachose nyota yavo yeropa. Mwanasikana wehusiku Icho chiunyanzvi, asi hazviitwe mu Forks.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Mwanasikana wehusiku
Kubvunzana naSusana Rodríguez Lezaun, director wePamplona Negra